फोहोरमा फ्याँकियो नयाँ बुलेटः मालिक भन्छन्, ‘रोयल इनफिल्डले धोका दियो, अब यसको काम छैन’ – FeatureNepal
फोहोरमा फ्याँकियो नयाँ बुलेटः मालिक भन्छन्, ‘रोयल इनफिल्डले धोका दियो, अब यसको काम छैन’
रोयल इन्फिल्डले आफ्नो नयाँ सिरिज पेगासस ५०० का मालिकलाई केही निश्चित समाधान दिन नसकेको भन्दै भर्खरै किनिएको नयाँ बुलेटलाई एक व्यक्तिले फोहोरमा फ्याँकेका छन् । सोसल मिडियामा पोष्ट भएको जानकारी अनुसार पेगासस मालिक धिरज जारुवाले बुलेटले नयाँ सिरिज बजारमा उतारेपछि अब उनको पेगासस ५०० को कुनै काम नभएकाले फोहारमा फ्याँकिएको बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसारउनले यसो गर्नुको कारण निकै रोचक छ । गत महिना रोयल इन्फिल्डले पेगासस ५०० मोटरसाइकलको लिमिटेड इडिसन भारतमा लञ्च गर्यो । उनीहरुले उक्त बाइक निकै विशिष्ट भएको बताउँदै भारतमा दुई सय ५० वटा र संसारभरी हजारवटा मात्र वितरण गरिने जानकारी दिए ।
तर त्यसको केही हप्तापछि अगस्ट २८ मा उक्त कम्पनीले क्लासिक सिग्नल ३५० भर्सन लञ्च गरे जुन पेगासस मोडल जस्तै देखिन्छ र ८० हजार भारु सस्तो पनि । पेगासस किन्न नसकेकालाई डिलरले फोन गरेरै उक्त नयाँ बाइक पेगासस जस्तै भएको र यसमा पेगाससमा नभएको एबीएस पनि भएको जानकारी दिए । कम्पनीको यस्तो व्यवहारका कारण संसारभरीका पेगासस मालिक रुष्ट छन् । उनीहरुले रोयल इन्फिल्डले निकै सिमित भनिएको बाइकको कपी लञ्च गरेर आफूहरुलाई धोका दिएको बताएका छन् ।
पेगासस मालिकले इमेल र फोनमार्फत् चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएका कारण पनि आफूहरुलाई थप रिस उठेको बताएका छन् ।
धिरजले एक मिडियासँगको कुराकानीमा जहिलेसम्म कम्पनीले यो समस्याको समाधान गर्दैन, उनले आफ्नो मोटरसाइकल फोहोरको थुप्रोबाट बाहिर ननिकाल्ने बताएका छन् । केही अन्य प्रयोगकर्ताले पनि रोयल इन्फिल्डलाई ट्याग गर्दै आफ्नो बाइकलाई फोहोरमा फ्याँकेर ट्वीट गरेका छन् ।
Previous यो हो ‘संसारको सबैभन्दा धनी कमिला’, चोरेर ल्यायो हिरा (भिडियो)
Next ओखलढुंगामा एक युवाले भूत सम्झेर श्रीमतीलाई खुकुरी प्रहार गरेपछि !
अनुहार मिल्दा १७ वर्ष जेलको बास, निस्केपछि १२ करोड क्षतीपूर्ती माग
ओखलढुंगामा एक युवाले भूत सम्झेर श्रीमतीलाई खुकुरी प्रहार गरेपछि !
जुम्ली स्याउ काठमाडौंमा
चरासँग ठोक्किएर नेपाल एयरलाइन्सको जहाज ग्राउन्डेड